China Metal CNC Machining ထုတ်လုပ်သူနှင့် ပေးသွင်းသူများ - Youlin
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC > CNC Machining > သတ္တု CNC Machining
OEM Metal CNC Machining ကို တရုတ်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်သည်။
We've one of the most innovative manufacturing devices, experienced and qualified engineers and workers, accounted good quality handle systems and alsoafriendly experienced income team pre/after-sales support for Manufacturer of China OEM High Quality Metal CNC Machining, We invites you နှင့် သင့်ကုမ္ပဏီသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတူတကွ ရှင်သန်ကြီးထွားရန်နှင့် ကမ္ဘာအနှံ့စျေးကွက်နေရာ၌ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော အနာဂတ်ကို မျှဝေပါ။
တရုတ် CNC၊ သတ္တု CNC Machining၊ "သုညချွတ်ယွင်းချက်" ၏ရည်မှန်းချက်နှင့်အတူထုတ်လုပ်သူ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုစိုက်ရန်နှင့် လူမှုဘဝပြန်လည်ရရှိရန်၊ ဝန်ထမ်းများ၏လူမှုရေးတာဝန်ကို ကိုယ်ပိုင်တာဝန်အဖြစ် ဂရုစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ win-win ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်စေရန်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ မိတ်ဆွေများအား လာရောက်လမ်းညွှန်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ကြိုဆိုပါသည်။
1. Metal CNC Machining အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
Youlin သည် ကျယ်ပြန့်သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် တိကျသောသတ္တု CNC Machining ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အလွန်တိုတောင်းသောအလုပ်များ (100 ထက်မနည်း) တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော်လည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ထူးခြားချက်မှာ 1,000 မှ 10,000 အပိုင်းအထိ ထုထည်အလုပ်များဖြစ်သည်။ အစိတ်အပိုင်းပေါင်း ၁ သန်းကျော်ကို အလုပ်အကိုင်များ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အသုံးများသောပစ္စည်းများမှာ ကြေးဝါ၊ အလူမီနီယမ်၊ 300 နှင့် 400 စီးရီးသံမဏိများ၊ သံမဏိနှင့် ပလတ်စတစ်အမျိုးမျိုးတို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏စက်များတွင် ပြင်ပအချင်းခံနိုင်ရည်အား +/-.0002â€³ (.005 mm) ကိုင်ဆောင်ထားလေ့ရှိသည်။ ပိုမိုနီးကပ်စွာခံနိုင်ရည်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နောက်ဆုံးအချင်းများကို ကြိတ်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ သတ္တု CNC Machining စွမ်းရည်များ၊ အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက် အတွေ့အကြုံနှင့် ကတိကဝတ်များက မှန်ကန်စွာလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သောအခါတွင် သင်ခေါ်သော သတ္တုအရောင်းဆိုင်ကဲ့သို့ ဂုဏ်သတင်းကို ရရှိစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ပြီးစီးခဲ့သော ပရောဂျက်များ၏ အစုစုကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ သို့မဟုတ် ယနေ့ Metal CNC Machining ကိုးကားချက်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
2. Metal CNC Machining အလုပ်လုပ်ပုံ။
CNC စက်သည် တိကျသော ကုဒ်အစုံကို ပေးထားသည်။ ကုဒ်သည် စက်အား မည်သည့်နေရာနှင့် ကွက်လပ်မှ ပစ္စည်းကို မည်သို့ဖြတ်ရမည်ကို ပြောပြသည်။ CNC စက်ကုဒ်တွင် အစိတ်အပိုင်းကို ဖန်တီးနည်းဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များစာရင်းပါရှိသည်။ ညွှန်ကြားချက်များသည် အပိုင်းကိုဖန်တီးရန် လိုအပ်သောကုဒ်များပါရှိသော Computer Aided Design (CAD) ဖိုင်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ ကုဒ်သည် tooltip ကိုဘယ်မှာထားရမလဲ၊ ထို့နောက် tooltip သည် မည်မျှမြန်မြန်လည်ပတ်သင့်သည်၊ နှင့် နောက်ဆုံး tooltip သည် မည်သည့် coordinates ကိုရွေ့ရမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။ CNC စက်များသည် သတ်မှတ်ဝင်ရိုးပေါ်တွင် သြဒိနိတ်များကို အသုံးပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် X-, Y- နှင့် Z-axes များပေါ်တွင် အစိတ်အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်နိုင်စေမည့် ဘက်စုံဝင်ရိုး CNC စက်များကို အသုံးပြုပါသည်။ CNC စက်များသည် အစိတ်အပိုင်းများကို အလွန်တိကျစွာ ဖြတ်တောက်သည်။ စက်ကို ကွန်ပြူတာဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့် အပိုင်းတစ်ခုစီသည် ပထမပိုင်းနှင့် အတိအကျတူညီနေမည်ဖြစ်ပြီး ပုံတူကူးချခြင်းကို မြန်ဆန်လွယ်ကူစေသည်။
3. သတ္တု CNC Machining ပစ္စည်းများ
အလူမီနီယမ်သည် အလွန်ပျော့ပျောင်းသောသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး စက်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ပစ္စည်းသည် ခိုင်ခံ့မှ အလေးချိန်အချိုးအစား ကောင်းမွန်ပြီး အသုံးချမှုအကွာအဝေးအတွက် အမျိုးအစားများစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
âœ”6061-T6 ၅၀၅၂ “၁၀၆၀ ၃၀၀၃ “၄၁၃၀ “၄၁၄၀ “၅၀၈၃ “၆၀၈၂ âœ”5A12 “၇၀၇၅ ၅၀၅၂ ၂၀၂၄ ၁၁၀၀ ၃၀၀၄ “၅၇၅၄ “၆၀၆၃ “၇၀၅၀ âœ”5A02
ကြေးဝါသည် အပလီကေးရှင်းများစွာအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ၎င်းသည် ပွတ်တိုက်မှုနည်း၍ လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်မှု ကောင်းမွန်ပြီး ရွှေရောင် (ကြေးဝါ) အသွင်အပြင်ရှိသည်။ ကြီးမားသောဝန်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများတွင် အသုံးများသည်။
C36000 âœ”C37800 âœ”C27400 âœ”C10200 âœ”CW617N âœ”HPb59-1
Stainless Steel သည် အပူချိန်မြင့်မားစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဓာတ်တိုးမှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ စက်အစိတ်အပိုင်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး အစိတ်အပိုင်းများ စသည်တို့တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုကြသည်။
“၃၀၃ “၃၀၄ “၃၁၆ âœ”316L “၄၂၀ “၄၃၀
တိုက်တေနီယမ်အလွိုင်းသည် ၎င်း၏ပေါ့ပါးသောအလေးချိန်၊ မြင့်မားသောခိုင်ခံ့မှုနှင့် သံချေးတက်ခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသောကြောင့် မော်တော်ယာဥ်လုပ်ငန်းတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
တိုက်တေနီယမ် အဆင့် ၂ တိုက်တေနီယမ် 6Al-4V
အထူးသံမဏိဆိုသည်မှာ အထူးဖွဲ့စည်းမှု၊ အထူးထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၊ အထူးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ပါရှိသော အထူးလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သော သံမဏိတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သာမာန်သံမဏိများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အထူးသံမဏိများသည် ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှု၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ၊ ဇီဝသဟဇာတနှင့် နည်းပညာဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ စက်ယန္တရား၊ မော်တော်ကား၊ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ သင်္ဘော၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မီးရထားနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
"တူးလ်သံမဏိ âœ“သံမဏိ “သံမဏိသေ "မြန်နှုန်းမြင့်သံမဏိ âœ” တန်စတင်စတီးလ် "မန်ဂနိစ်သံမဏိ မိုလစ်ဘဒင်နမ်သံမဏိ âœ” တန်စတင် ခရိုမီယမ်သံမဏိ
4. သတ္တု CNC Machining ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။
သတ္တု CNC Machining သည် သုံးစွဲသူများအား ထုတ်လုပ်သူ ရှေ့ပြေးပုံစံ အစိတ်အပိုင်းများ သို့မဟုတ် အသေးစား ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် တိကျပြီး ထပ်တလဲလဲနိုင်သော နည်းလမ်းကို ပေးပါသည်။ Metal CNC Machining ကို မလုပ်ဆောင်မီ၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် များစွာသော ကိန်းရှင်များရှိပါသည်။ သတ္တု၏ မာကျောမှုသည် စက်အစိတ်အပိုင်းကို စက်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော အချိန်ကြာချိန်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။ ကာဗွန်သံမဏိကဲ့သို့ ပိုမာသောသတ္တုများသည် ပိုမိုနှေးကွေးသောဖြတ်တောက်မှုအရှိန်ကို လိုအပ်သည်။ ပိုနှေးသောဖြတ်တောက်မှုအရှိန်သည် ကွက်လပ်မှအရာများကို ဖယ်ရှားရန် အချိန်ပိုကြာလိမ့်မည်။ အလူမီနီယမ်သည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသော ပစ္စည်းဖြစ်သောကြောင့် စိတ်တိုင်းကျ အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းထက် လေးဆနီးပါး မြန်ဆန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ သတ္တုအမျိုးအစားသည်လည်း နောက်ဆုံးကုန်ကျစရိတ်ကို များစွာထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ပဏာမစျေးနှုန်းခန့်မှန်းချက်လုပ်သောအခါ သတ္တုအမျိုးအစားနှင့် ၎င်း၏ကုန်ကျစရိတ်ကို သေချာစဉ်းစားပါ။
Metal CNC Machining သည် ရှေ့ပြေးပုံစံ သို့မဟုတ် ထုထည်နည်းပါးသော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများနှင့် ကိုင်တွယ်သောအခါတွင် သေးငယ်သော သတ္တုအစိတ်အပိုင်းများ လည်ပတ်မှုအတွက် စံပြကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Youlin သည် CNC စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် ဒုတိယလုပ်ငန်းစဉ်များစွာကို ပေးဆောင်သည်။ သတ္တုအစိတ်အပိုင်းကို စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ပြီးနောက်၊ ၎င်းကို anodizing၊ plating သို့မဟုတ် powder coating အတွက် ပေးပို့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် စိတ်ကြိုက်အလူမီနီယမ်ဖြင့် ပြုပြင်ခြင်းကို အထူးပြုသော်လည်း သုံးစွဲသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းရန်အတွက် သတ္တုအမျိုးမျိုးဖြင့် အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
Q: သတ္တု CNC စက်ဖြင့် သင်ဘာလုပ်နိုင်သနည်း။
A: CNC စက်ဖြင့် ဖန်တီးခြင်းသည် လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခြင်းကြောင့် ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် လျင်မြန်စွာ ရရှိလာပါသည်။ လက်စွပ်များ၊ ရင်ထိုးများ၊ လက်ကောက်များ၊ နားကပ်များ၊ နားကပ်များ၊ ချည်ကလစ်များ၊ လည်ဆွဲများ၊ ခါးပတ်ခေါင်းများနှင့် CNC စက်များနှင့် လေးကြိုးများကိုပင် ဖန်တီးနိုင်သည်။
Q: စက်အတွက် အခက်ခဲဆုံး ပစ္စည်းက ဘာလဲ။
A- â—†Tungsten သည် သဘာဝသတ္တုတိုင်း၏ ဆန့်နိုင်စွမ်းအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ကြွပ်ဆတ်ပြီး ထိခိုက်မှုအပေါ် ကွဲအက်တတ်သည်။
â—†တိုင်တေနီယမ်သည် ဆန့်နိုင်အား 63,000 PSI ရှိသည်။
â—†Chromium၊ မာကျောမှုအတွက် Mohs စကေးပေါ်ရှိ၊ ပတ်ပတ်လည်တွင် အပြင်းထန်ဆုံးသတ္တုဖြစ်သည်။
A- ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုနှင့် ခိုင်ခံ့မှုနည်းသောကြောင့် လူသိများသော ကြေးဝါသည် စက်ပြုလုပ်ရန် အလွယ်ကူဆုံးနှင့် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာဆုံး ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤစက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကို အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းအများအပြားတွင် အသုံးပြုသည်။ အချို့သော ဆေး၊ လူသုံးကုန်နှင့် လျှပ်စစ်တို့ ပါဝင်သည်။